होन्डा, टिभिएस र हिरोले मूल्य बढाएसंगै नयाँ बर्षमा महंगो भए यी बाइक! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
होन्डा, टिभिएस र हिरोले मूल्य बढाएसंगै नयाँ बर्षमा महंगो भए यी बाइक!
नेपाली बजारमा सर्बाधिक बिक्री हुनेमध्येको तीनवटा बाइक टिभिएस, होन्डा र हिरोले आफ्ना अधिकांश मोडलका मोटरसाइकल र स्कुटरमा मूल्य बढाएका छन् ।
कम्पनीले नयाँ बर्ष २०२२ लाई लक्षित गरी मूल्य बढाएपछि यी बाइक थप महंगो भएको छ । नयाँ मूल्य सुची अनुसार टिभिएसले सबैभन्दा बढी अपाचे आरटीआर १६० फोरभी आरडी रिफ्रेस र टीभीएस एक्सएल १०० मा १० हजार रुपैयाँका दरले बढाएको छ ।
यी बाइकको मूल्य क्रमशः ३ लाख १८ हजार ९ सय र १ लाख ३८ हजार ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।त्यसैगरी अपाचे आरटीआर २०० फोरभी एफआई बीएस६ को ६ हजार रुपैयाँले बढेर ३ लाख ९६ हजार ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ भने अपाचे आरटीआर २०० फोरभी एबीएसको५ हजार रुपैयाँले बढेर ३ लाख ६७ हजार ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
अन्य केही मोडलहरुमा १ देखि ४ हजार रुपैयाँ सम्मको दरमा मूल्य वृद्धि गरिएको छ । त्यसैगरी हालै नेपाली बजारमा भित्रिएको रेडर र अन्य केही मोडलमा पनि उही मूल्य कायम छ ।
उता हिरोले आफ्नो अधिकांश मोडलको मूल्यमा १ देखि ३ हजार रुपैयाँ सम्म वृद्धि गरेको छ । नेपाली बजारमा सबैभन्दा लोकप्रिय रहेको एक्सपल्स २०० को १ हजार ५ सय र स्प्लेन्डर प्लसको १ हजार रुपैयाँले बढेको छ ।
यी मोटरसाइकलको मूल्य अब क्रमशः ४ लाख ३ हजार ५ सय र १ लाख ९० हजार रुपैयाँ भएको छ ।त्यसैगरी होन्डाले जारी गरेको नयाँ मूल्य सूची अनुसार साइन, युनिकर्न, एक्स–ब्लेड र सीबी हर्नेटको मूल्यमा वृद्धि गरिएको छ ।
अन्य मोटरसाइकल र स्कुटरको मूल्य भने यथावत छ ।सबैभन्दा बढी बृद्धि होन्डा एक्स–ब्लेडमा गरिएको छ । यसको मूल्यमा ६ हजार रुपैयाँले वृद्धि गरी ३ लाख ३० हजार ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
साइनका सबै भेरिएन्ट र सीबी युनिकर्न १५० तथा सीबी हर्नेटमा ५ हजार रुपैयाँको दरले मूल्य वृद्धि गरिएको छ । नेपाल अटो
टोर्क मोटर्सले लन्च गर्यो पहिलो इलेक्ट्रिक बाइक क्रेटोस, यस्ता छन् विशेषता !
भारतीय बजारमा टोर्क मोटर्सले आफ्नो पहिलो इलेक्ट्रिक बाइक क्रेटोस लन्च गरेको छ । टोर्क मोटर्सले
नेपालमा भित्रियो सेगवे नाइनबोटको ई-१०० इलेक्ट्रिक स्कुटर, २ लाख ९१ हजार मूल्य !
सेगवे नाइनबोटको इलेक्ट्रिक स्कुटर ई–१०० नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । अमेरिकी ब्रान्ड सेगवे नाइनबोटको नेपालका
यामाहाले ल्यायो नयाँ इलेक्टिक स्कुटर ईएमएफ, यस्तो विशेषता !
यामाहाले नयाँ इलेक्ट्रिक स्कुटर ईएमएफ ताइवानमा सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ ईएमएफ इलेक्ट्रिक स्कुटर, ईसी–०५
अब एसवाईएम एनएचटी २०० को मूल्य ६ लाख २५ हजार पुग्यो
नेपाली बजारमा नयाँ लटको एसवाईएम एनएचटी२०० मोटरसाइकल भित्रिएको छ । पहिलो स्टक क्लियरेन्स भए पछि
अब टोयोटा हाइलक्स भारतमै उत्पादन हुने
टोयोटा हाइलक्स भारतीय बजारमा सार्वजनिक गरिएको गरेको छ । यसको बुकिङ पनि सुरु भइसकेको छ
नेपाली बजार भित्रियो नयाँ इलेक्ट्रिक कार ओरा गुड क्याट, यस्ता छन् विशेषता !
चीनको प्रख्यात कार उत्पादक कम्पनी ग्रेटवालले उत्पादन गरेको इलेक्ट्रिक कार ओरा गुड क्याट नेपाल भित्रिएको